Damm Jadiid | Voice Of Somalia
Tag Archives: Damm Jadiid
Cabdi Wali Sheekh “Mooshinka Sharci Darrada ah Waxaa Lagu Difaacayaa Wasiir Saaxiib La ah Madaxweynaha”.
Cabdi Wali Sheekh R/Wasaaraha DF-ka oo shalay gelinkii dambe warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa Muqdisho ayaa sheegay in shiqroollo halis ku ah maamulkiisa lagasoo abaabulayo dhanka Madaxtooyada.
Wuxuu eedayn kulul ujeediyay Xasan Gurguurte iyo wasiirka Garsoorka Faarax Cabdu Qaadir isagoo hadlayay ayuu yiri “”Madaxtooyada waxaa laga soo abaabulay mooshin sharci darro ah oo caqabad ku ah habsami usocodka xukuumadda,shacabka soomaaliyeed waxaan usheegaynaa in dad dana gaar ah leh ay doonayaan in ay khal-khal geliyaan hay’adaha qaranka”.
Markii ugu horraysay ayuu daabolka ka qaaday halka ay iska arkeen Xasan Sheekh wuxuuna carrabka ku adkeeyay in dad saaxiiba la ah hoggaamiyaha DF-ka ay khilaafka horay usii riixeen.
Cabdi Wali Sheekh ayaa si diirran usoo dhaweeyay buuqii ay ku dhaqaaqeen qaar katirsan xildhibaanada baarlamaanka wuxuuna ku sifeeyay ku difaacaya wax uu ugu yeeray “Xukuumad Sharci ah”.
Dhageyso C/Weli OO Madaxweynaha eedeeyey.lite
DHAGEYSO:-Sambalooshe “Dagaal socda iyo Shaag wareegaya ayaan soo dhex galay Waxana Waddankaan uu ka degi la’ yahay Dad aan Shaqeyneyn in la shaqeeyana aan oggoleyn”
Sambalooshe oo ka hadlayey xarigga Xildhibaan ka tirsan Baarlammaanka Soomaaliya, ayaa sheegay in falkaasi uu u dhacay si kama’ ah ama kedis ah oo durbana lasii daayay Xildhibaanka, markiisida uu sheegay uu maqlay xarigga Xildhibaanka uuna isaga sii daayay.
C/laahi Maxamed Cali(Sanbaloolshe) ayaa meesha ka saaray jiritaanka wararka ku aaddan in ergo dhanka xafiiska Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya ka socotay oo xarigga Xildhibaanka kala hadlirabtay isaga uu aflagaadeeyay, wuxuuna sheegay in arrintaasi ay tahay mid waxba kama jiraan ah.
Waxaa sidoo kale wax laga weydiiyay Sanbaloolshe, arrinta ku aaddan hub ka dhigistii uu ka waday Magaalada Muqdisho, wuxuuna sheegay in muhiimadda koowaad ay tahay in amniga Magaalada Muqdisho la dhowro, tan iyo markii Magaalada Muqdisho uu ka billaabay hub ka dhigista ammaanka Magaalada wuxuu noqday buu yiri mid si weyn u hagaagay oo noloshii Magaalada ay caadi kusoo noqotay.
“Magaalada markaan imid waxaan ugu imid meel waliba oo tikniko carareyso waan yaabay yaa Shabaab ah yaase Dowlad ah waan kala saari waayay, Dowladda weerar ayaa ku socday Xildhibaannada ayaa la dilaayay, xarumaha Dowladda ayaa la weeraraayay marka waxaa muhiim ah in la kala saaro Shabaab iyo Dowladda cidda udhaxeysa ee hubka ku dhex-haysatay Magaalada Muqdisho”Ayuu hadalkiisa siiraaciyay Sambalooshe.
Ugu dambeyn waxaa la weydiiyay Su’aal ku saabsaneyd caburintii uu ku sameeyay Saxaafadda Magaalada Muqdisho oo uu ka mamnuucay baahinta wararka ku aadan Shabaab, balse wuxuu muujiyay inuu ku saxan yahay go’aanka uu Warbaahinta ku caburiyay.
Sambalooshe ayaa ku jawaabay “Saxaafadda waa midda kaliya ee aan ka dar-daarmi doono markii aan xilka ka tagaayo sababtoo ah waxa ay baahiyaan codadka Cali Dheere iyo tusaale Godane oo kale oo malaayiin qof oo Soomaali ah ay gaarsiinayaan, marka waa Barobogaanka kaliya ee ay isticmaali jireen Shabaab oo lagu faafin jiray howlgalladooda, Turkiga waad aragtay doorashadii markii ay dhaceysay Twitterka iyo Facebooka waa la xiray si doorashada ay nabadgelyo ugu dhacdo”
Cabdullaahi Maxamed Cali(Sambaloolshe), ayaa xilka Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya haayay 2 Bilood oo qura, ugu dambeyna 7-diiBishan ayaa xilka sirasmi ah Golaha Wasiirada ay uga xayuubiyeen.
Maxamad Xassan Xaad oo kamid ah odayaasha taageera ciidamada shisheeye iyo dowladda oo dhawaan shaaca ka qaaday in madaxweyne Xassan Sheekh uu hanjabaad kala kulmay, wadankuna gumeysi ku jiro ayaa u muuqda mid cadaadis la saaray, isagoo sheegaya inaanu isagu ahayn qofkii cabanayay!!
Isagoo u waramayay war baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan ayuu si cad gaashaanka ugu daruuray arintaas illaa markii dambe la dhageysiiyay codkiisii qeylo dhaanta ahaa.
Maxamad Xassan Xaad ayaa sidoo kale wax laga weydiiyay duullaanka ay xabashidu kusoo qaaday wadanka, abaaraha iyo arimo kale oo muhim ah.
DHAGEYSO:-DOWLADA FEDERAALKA AH oo Sheegtay inay Lacag aad u Badan ay ka Hesho Ehelada Dadka laga Raafo Muqdisho.
Posted on June 16, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Xaashi Cilmi Nuur oo ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa sheegay iney sannad walba ay soo xareeyaan dhaqaale aad u badan oo ay ka qaadaan ehelada dadka laga raafo magaalada Muqdisho.
Hadalkan ayuu ka sheegay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho oo uu goob joog ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare Caydiid Ilka Xanaf.
DAAWO VIDEO:-Dowladda iiraan oo Xoojisay Mashaariicda Shiiceynta ay ka wado Magaalada Muqdisho.
Dowladda Iiraan oo kamid ah dowladaha faragalinta kuhaya Dalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ka hirgalisay iskuulo ay wax kubartaan ubad Soomaaliyeed.
Hey’ada Khumeyni ee Iiraan ayaa dardar galisay mashaariicdeeda shiiceynta Magaalada Muqdisho waxaana ay hadda la falgalaysaa dadka barakacayaasha oo ah dad danyar oo lagu dhex fidin karo sunta Hey’adda.
Hey’adda ayaa dhaqaallo adag kubixisay dhalinyaro gabdho iyo wiilal isugu jira oo ay si wadareed isugu guurisay Muqdisho.
Dowladda Xasan Sheekh ayaa isha ka daawanaysa shiiceynta ka socota Magaalada Muqdisho Caasimada Soomaaliya.
Shiicada ayaa sidoo kale ku fidaya Magaalooyinka Galguduud ay ka joogaan Suufiyada halkaasi oo mashaariic ay kawadaan.
Hoos Ka Daawo Filim Muujinaya Shiiceynta Iiraan Ee Muqdisho.